जन्म दिनको शुभकामना!
Sun, May 27, 2018 | 15:12:07 NST
10:24 AM (2 years ago)
मेरो बुवा आमा दिदीबहिनि तथा दाजुभाइ सबैलाई मिठो सम्झाना। म यहाँ सन्चै आरामै भऐको जानकारी गराउँछु ।
विषेश, मेरो श्रीमती अंमृता कौशलको जन्म दिन परेकोले हार्दिक शुभ कामना छ। आज मिति २०७३/६/१२/ गतेको दिन १९ पुगे र २० सालमा पाईला टेकेकोमा तिम्रा हरेक पाइलामा सुख शान्ति रहोस् भन्ने कामनम सहित, जन्म दिनको धेरै शुभकामना! म उहीँ सात समुद्र पारिबाट, प्रितम कौशल।